Yiza wonwabele ukurhoxa okunoxolo kwiHaena entle eKa Wai Aloha TVNC-5137 - I-Airbnb
Yiza wonwabele ukurhoxa okunoxolo kwiHaena entle eKa Wai Aloha TVNC-5137
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKauai Palms Real Estate Co.
UKauai Palms Real Estate Co. yi-Superhost
Beka kwindawo yasemaphandleni yeKauai's North Shore phakathi kwamadlelo kunye nolwandle, enye yezona ndawo zintle emhlabeni. Yonwabela iholide enoxolo nepholileyo eKa Wai Aloha.
Ukukhanya, kumnandi kunye namanyathelo okuya elunxwemeni, eli khaya lilungile kwiindibano zosapho kunye nokurhoxa. I-Ka Wai Aloha ikwi-Haena iibhloko ezimbini kude ne-pristine, amanzi e-aqua e-Naue Bay kunye nohambo lwemizuzu engama-20 elunxwemeni ukuya eKauai edumileyo, iTunnels Beach. I-Haena inendlela engundoqo enye ephela kwichibi eliluhlaza eKe'e Beach kunye nomkhondo wohambo olubalaseleyo kuNxweme lweNapali ukuya eKalalau.
Le ndlu ineplani yomgangatho ovulekileyo, amagumbi okulala amahlanu, i-lanai, kunye neyadi enkulu yangasemva. Ikhitshi isandula ukwenziwa ngokutsha kwaye ivuleleke kumagumbi okutyela nawokuhlala.
Indlela yaselwandle enqumla kwisitalato iyakusa eNaue Bay ukuya kuqubha, ukuntywila nge-snorkeling kunye ne-shelling. Ukuhamba ngemizuzu eli-10 ezantsi elunxwemeni kuyakusa kwiTunnels elunxwemeni ukuze ufumane i-snorkeling ekumgangatho wehlabathi, ukuntywila kunye nokusefa.
Ukuba ujonge ulonwabo kunye ne-adventure okanye nje i-snorkeling encinci kunye nesitulo saselwandle, iKa Wai Aloha iya kuba sisiseko sekhaya kwiholide yakho yamaphupha!
>>>Ufuna imoto erentwayo? Buza malunga nokufumaneka kwemoto.
I-GE/TAT yerhafu yelayisensi. 181-903-5648-01
Iphepha-mvume lokuRenta ngeKheli TVNC-5137
Isinyanzelo esisiSinyanzelo: I-Haena ikwindawo yokuPhuma kwiTsunami. Ulwazi oluninzi lufumaneka kwincwadi yendlu.
Ukundwendwela iKe'e Beach kunye neNapali Trail yenza ubhukisho ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90 kwangaphambili
I-Haena lilizwe elisemaphandleni elunxwemeni. Inye kuphela indlela kwaye iphelela eKe'e Beach, kwiNapali Coast Trailhead.
Ubumelwane yindawo yokuhlala ezolileyo enezinye iilwandle ezintle kakhulu kwiplanethi. Yiza wonwabe!
Umbuki zindwendwe ngu- Kauai Palms Real Estate Co.
Nceda ufowunele okanye uthumele umyalezo kumphathi wepropathi, uKrisha apha 808-482-0550, ukuba ufuna uncedo.
Inombolo yomthetho: 580090060000
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hanalei